01 - Indlu yeMinquma
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguCarmine
Yiza uzonwabele ummandla iCampania kunye neRoma ngexesha lokuhlala kwi-panoramic yendlu entle ebekwe entliziyweni yendlu yosapho nakuphi na ukuthuthuzela. Ngeentsuku ezimnandi, i-pool yokubhukuda enhle enetyuwa kunye nomthunzi ikulindele. Nokuba ulusapho okanye umhlobo, uya kuba notshintsho olumnandi lwendawo.
Ifulethi elizimeleyo, le-80m², kubandakanywa namagumbi avaliweyo ama-2 (iindawo zokulala ezi-7 zizonke). Hlala uvulekile kwindawo yabucala emalunga ne-20m² enombono wendawo. Ngeentsuku zasehlotyeni ezishushu, unokuphumla ngasechibini emazantsi emithi yomnquma
Isiqingatha phakathi kweRoma (50min) kunye neNaples (40min), 30km ukusuka kwindawo yokuqala yokuchithela iiholide yaseSperlonga, echazwe njengeyona dolophu intle e-Italiya, kufutshane nesiza sembali saseMonte Cassino kunye neelali eziqhelekileyo ezifana neArpino, uya juggle Phakathi kotyelelo lwenkcubeko. , ukutyelelwa kwe-gourmet kunye nokungenzi nto.
Sihlala sinakho ukuba unqwenela abakhenkethi okanye ezinye iingcebiso ...